Macluumaadka Shirkadda - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCBFuture waxaa ka go'an inay bixiso adeeg tayo sare leh iyo dhaqaale One-Stop PCB adeegga shirarka dhammaan macaamiisha adduunka. PCBFuture waxaa bilaabay SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD waxayna ku taalaa xarunta elektarooniga aduunka ee Shenzhen China.
KAISHENG PCB oo la aasaasay sanadkii 2009, waa mid ka mid ah shirkadaha soosaara guddiga wax soo saarka guddiga wareegga daabacan ee adduunka. Si loo bixiyo khibrad macmiil qiimo jaban oo heer sare ah, KAISHENG waxay bixisaa adeegyo isku imaatinka PCB oo ay kujiraan qaabeynta PCB, waxsoosaarka PCB, Kaabayaasha qaybaha iyo iskuxidhka PCB macaamiisha. PCBFuture waa nooc hoosaad ka kooban shirkadda KAISHENG oo ku tiirsan hal adeeg oo isku imaatin ah PCB.
Tan iyo markii la aasaasay, PCBFuture waxay inta badan siisay adeegyo isku-uruurinta PCB-ga macaamiisha Yurub, Ameerika, Kanada, Japan, Kuuriya iwm. bixinta waqtiga, qiimaha tartanka iyo adeegga aan fiicnayn waa habka kaliya ee lagu guuleysto daacadnimadaada. Tani waxay kuu oggolaaneysaa, macaamiisha sharafta leh, inaad diirada saarto meheraddaada aasaasiga ah si fiicanna loo hubiyo in baahiyahaagu ay ku jiraan gacmo aamin ah oo khibrad leh.
PCBFuture waxay sii waddaa inay la soo baxdo tiknoolajiyad horumarsan gudaha iyo dibaddaba, waxayna qaadatay aaladaha casriga ah ee SMT ee ka socda Japan iyo Jarmalka, kuwaas oo jecel mashiinnada meelaynta xawaaraha sare, mashiinnada saxaafadda ee otomaatiga ah iyo sidoo kale 10 mashiinada dib u socodka qulqulka. Shirarkeena PCBA iyo aqoon isweydaarsiga aan boorka lahayn waxaa damaanad qaadaya ogaanshaha AOI iyo raajada. Waxaan si buuxda ula jaanqaadi karnaa nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001: 2015, guddiyada wareegyada oo dhami waxay ku hoos jiri doonaan baaritaanka korantada ka hor inta aan la soo dhigin khadadka isku imaatinka SMT, dhammaan PCBA-yada sidoo kale waa la baari karaa haddii loo baahdo ka hor dhalmada. Hormarinta Joogtada ah waa mid ka mid ah dhaqammadayada shirkadeed, waana inay ahaataa taada middaada, taas oo riixeysa iskaashiga muddada-dheer iyo xooggan ee naga dhexeeya.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan u kaxeyno macaamiisheenna iyo annagaba inaan ku guuleysano kooxdeena xirfadleyda ah ee leh khibrad hodan ah, daacadnimo iyo feejignaan. Shaqaalaheennu waxay ka caawin karaan macaamiisha bixinta xalal isku dhafan laga bilaabo iibka ka hor iyo iibka kadib. Xirfadladeena xisaabaadka kharashka sidoo kale way kula shaqeyn karaan adiga si loo abuuro xalalka ugu wax ku oolka badan habka waxqabadkaaga.
Xirfadle, Debecsanaanta iyo Kalsoonida ayaa ah wadnaha sida aan ula kulanno baahiyaha macaamiisheena. Waxaan si adag u aaminsanahay inaad gebi ahaanba ku qanacsan tahay haddii aad nala shaqeyso. Aynu ku raaxaysanno shaqada oo aan isla korno.